Askari Milatari ah oo Muqdisho dil iyo dhaawac ugu geystay askar Boolis ah. | XAL DOON
Home NEWS Askari Milatari ah oo Muqdisho dil iyo dhaawac ugu geystay askar Boolis...
Askari Milatari ah oo Muqdisho dil iyo dhaawac ugu geystay askar Boolis ah.
Magaalada Muqdihso waxaa ka socda ugaarsi ay isku hayaan Ciidamada booliska iyo Milatariga Soomaaliya, kuwaasoo dagaal xooggan uu ka dhexeeyo.
Sida wararku sheegayaan Askari katirsan Ciidanka Milatariga Soomaaliya ayaa saqdii dhexe ee xalay wadada u galay askar boolis ah oo mareysay Isgoyska Sanca ee degmada Kaaraan, isagoo mar kaliya rasaas xoogan uu ku furay Ciidanka.
Saraakiisha amaanka ayaa inoo sheegay in toogashada uu geystay askariga Milatariga ah uu ku geeriyooday hal askari oo Boolis, halka dhaawac daran goobta looga qaaday laba askari oo kale oo ay wada socdeen, kuwaasoo iyana booliska kala tirsan.
Ciidmao ka baxay Saldhigga degmada Kaaraan, ayaa durba tagay halka weerarka uu ka dhacay, waxeyna sameeyeen howlgallo baaritaano ah, walow uu goobta isaga cararay askarigii Milatariga ahaa ee weerarka fuliyay.
Ciidamada ayaa goobta ka qaaday meydka askariga iyo dhaawaca askarta kale, kuwaasoo geeyay mid kamid ah xarumaha Caafimaadka, waxaana Saaka laga deyrinayaa xaalada Caafimaad ee labada askari ee dhaawacyada qabta.
Jimcihii ina dhaafay Ciidamo boolis iyo Milatari ah ayaa ku dagaalamay Isgoyska Maana Booliyo, halkaas oo dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay, iyadoo sidoo kale booliska ay qoriga Zabanka ku gubeen gaari Cabdi Bile ahaa oo Milatariga watay.
Sabtidii ku xigtayna waxa uu dagaal ka dhacay nawaaxiga baar Ayaan oo degmada Warta-Nabada ah, waxaana halkaasi ku dagaalamay Boolis iyo Milatari oo dil iyo dhaawacba isu geystay.